Alarobian'ny Lavenona 14 febroary 2018 - Fiomanana ho amin'ny PASKA Fiangonana Loterana Malagasy FLM Orleans
Ao anaty diary FLM 2018 sy Alimanaka dia ahitantsika fa Alarobian’ny Lavenona ity andro anio ity.
Misy Teny voaomana ho antsika kristiana rehetra mifanandrify amin’izany vanim-potoana izany, izay manamarika ny 40 andro mialoha ny Paska izay fotoanan’ny Karemy na ny Pasiona mitohy hatramin’ny herinandro Masina.
Indro ary atolotra antsika ireo teny ireo, ary manasa antsika hiditra amin’ny fiomanana ho an’ny Paska 2018.
Moa fifadiana toy izany va no ankasitrahako? Dia andro hampahorian’ny olona tena? Ny hampiondrika ny lohany tahaka ny zozoro sy ny hamelatra lamba fisaonana rarahan-davenona ho fandriany, moa izany va no ataonao hoe fifadiana sy andro ankasitrahan’i Jehovah?
Tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako: Dia ny hamaha ny famatoran’ny faharatsiana, sy hanaboraka ny fehin’ny zioga, sy handefa ny ampahorina ho afaka, ary hanapatapaka ny zioga rehetra?
Moa tsy ny hizara ny mofonao ho an’ny noana va, sy ny hampiantrano ny ory manjenjena, ary mba hanafianao izay hitanao mitanjaka, ka tsy hihirim-belona amin’ny namanao* ianao? [Heb. hiery ny nofonao]
Fa raha izany, dia hiposaka tahaka ny fahazavan’ny maraina ny fahazavanao, ary ho tonga faingana ny fahasitrananao; ny fahamarinanao ho loha-lalanao, ary ny voninahitr’i Jehovah ho vodi-lalanao
Ary amin’izany dia hiantso ianao, ary Jehovah hamaly; Eny, hanandratra ny feonao ianao, ary Izy hanao hoe: Inty Aho.
Hoy Nikodemosy taminy: Hataon’ny olona ahoana no hateraka rehefa lehibe; moa mahazo miditra any an-kibon-dreniny indray va izy ka hateraka?
Jesosy namaly hoe: Lazaiko aminao marina dia marina tokoa: Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin’ny fanjakan’Andriamanitra izy.
Izay aterahy ny nofo dia nofo; ary izay ateraky ny Fanahy dia fanahy.
Aza gaga noho ny nilazako taminao hoe: Tsy maintsy hateraka indray hianareo.
Ny rivotra mitsoka amin’izay tiany, ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay ihaviany na izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny Fanahy.
Ary raha mifady hanina hianareo, aza mety ho tahaka ny mpihatsaravelatsihy, izay malahelo tarehy; fa mampisotisoty ny tavany izy mba ho hitan’ny olona fa mifady. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany.
Fa hianao kosa, raha mifady hanina, dia hosory ny lohanao, ary sasao ny tavanao, mba tsy ho hitan’ny olona fa mifady, fa ho hitan’ny Rainao, Izay ao amin’ny mangingina; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin’ny mangingina, no hamaly anao.
Tsaroantsika ny fanontaniana naverimberin’i Lotera tamin’ny fotoan’androny hoe ahoana no ahitàna ilay Andriamanitra mpamindra fo, be fitiavana. Tsapan’i Lotera fa tsy mahay mahita sitraka eo anatrehan’Andriamanitra izy. Fantany ny halebiazan’ny fahotany, hatrany an-kibon-dreniny. Natahotra mafy ny fahaverezana mandrakizay Lotera.
Manoloana izany anefa, Andriamanitra ao anaty fahatsaràny dia namela ny fahotany.
Andriamanitra no hany tokana marina, ary Izy no manamarina fa tsy ny asa izay ataontsika. Tsy izay ezaka avy amintsika (fifadian-kanina, asa tsara, vavaka…) no mahavonjy antsika. Ny fandraisana amin’ny finoana ny fahasoavana omen’Andriamanitra antsika no mahavonjy antsika, amin’ny alalan’i Jesosy Kristy ary hazavain’ny Soratra Masina.
Ny asa tsara dia vokatr’io finoana io… Izany no làlana iantsoana antsika. Manasa anao ary hizotra amin’izany lalana izany.